Ngezinye izikhathi, omunye ungezwakala: "Ngihlale ngithandaza ezifaka esimweni engenangqondo!" Kanjani ukuba sikuqonde lokhu? Iziphi izimo akunakubangelwa the okungenangqondo? Njengoba ngokuvamile kwenzeka nabantu abacabanga njengawe umlando nalokho ithuba ngeke enze into engenangqondo? Funda ngakho esihlokweni.
Lisho ukuthini igama elithi "okungenangqondo"
Ushakov sika esishoyo Dictionary ubachazela igama elithi "okungenangqondo" ngokuthi "lutho, elingenalo ingqondo." UVladimir Ivanovich Dal - wesichazamazwi isiRashiya, e '53 kwaba Dictionary - ayekholelwa ukuthi "iwubuphukuphuku" - kuyinto "ugly, inelegant, lutho, ezingenalutho, esiyinkinga." Esishoyo Dictionary Efrayimi TF iyachaza ukuthi leli gama lisho ukuthi "kunemibhalo eyayihunyushwe kabi, babe yize."
Amagama anomqondo ofanayo nelithi izwi "okungenangqondo" okuningi: engeyinhle, ezihlekisayo, ezihlekisayo, silly, sezimiso, ezingenalutho, ongaziwa, oyisiwula, uyisiwula, aluhlaza cwe.
Manje kusobala ukuthi isimo okungenangqondo - lena izindaba eziyinqaba, saba abangenangqondo, abayiziphukuphuku nabangahlakaniphile ezihlekisayo, okuyinto akukhona okungavamile ukuba likhithike ezimpilweni zethu. Esinye isici esiyinhloko - umuntu uya phansi umlando ka wakhetha ezabo, futhi ngengozi, ngengozi. Wayekanye ngokuvamile behleka iphutha ngenkathi yena umdlali enkulu azizwa ihlazo, ukuphoxeka.
Ubani ongafaka ezifaka esimweni engenangqondo?
Noma ubani angangena indaba enjalo! Akekho okuzivikela ukuthi, ngokwesibonelo, ngesikhathi ephathini igingqike isidlo isaladi noma ikhekhe, ngephutha wathela ingilazi yewayini yokugqoka noma boss, ilele, falling phambi kwazo zonke izimenywa.
Njengoba ubona, endabeni iwubuphukuphuku ukushaywa wonke umuntu. Ngisho nezilwane ngokuvamile awela isimo iwubuphukuphuku. Ngokwesibonelo, ikhanda inja ukwazi kakhulu washaya emnyango, noma upholi, bezama ukuthola isiphuzo aphume endlini lencane, yawela emanzini.
abantu Non-umphakathi nosaziwayo
abantu Non-umphakathi kulula. ukushelela yabo yaziwa nguwe kuphela kulabo avela futhi wabukela okwesikhashana, futhi akunakwenzeka indaba ziyoba ngaphezu kwalokho emkhayeni. Kodwa nakhu usaziwayo, engene izimo engenangqondo, bahlupheke kakhulu. Paparazzi ngokuzama ukuba singabonisi miss noma yiziphi nehlazo, futhi izindaba silly ukuthi kwenzeke abadlali, abahlabeleli, osopolitiki, abagijimi, abaculi, izintatheli kanye bonke labo abazi izigidi, ngokushesha uthole emakhasini phambi amaphephandaba, nakuyi-Internet. Abantu bayakujabulela ukufunda "yellow" cindezela, nixoxa ngalesi Antics izinkanyezi, amaphutha abo, izingubo kunganambitheki, ujabulela isimo engenangqondo ukuthi laziwa obala. Lona omunye downsides odumo. sad kuphela, ukuthi ngokuvamile ngenxa ilukuluku okungenamsoco omphakathi kanye usulu labo wangena kulesi simo, ahlupheke hhayi kuphela abalingiswa abasemqoka abazizwa ngayo lomcimbi, kodwa futhi amalungu emikhaya yabo. Kungaba buhlungu ngempela.
Lapho abantu izindaba ezinjalo zenzeka?
Ungakwazi uhlu eziningi izizathu ukuthi kwenzeke izimo ayinangqondo futhi iwubuphukuphuku:
Stupid ingozi, ngengozi ukuba umlingisi senzakalo akusona icala. A isivunguvungu oqinile umoya waphakamisa isiketi sakhe, imishini ephukile, kwakukhona ukuhluleka ohlelweni, bagibele lock - uhlu alupheli.
Stupid isinyathelo - umuntu ophethe icala, lapho isandla sawo singafinyeleli okwanela, noma izenzo ayengayilungiselelanga nakuba ngezinye izikhathi lokhu kucwaninga bagcina kahle.
Basebaningi abantu abangakwazi ukufunda - funny ukuzwa izimpendulo wabantu abayiziphukuphuku noma agumenti omude ngale ndaba engumuntu, ongaziwa ngempela.
Utshwala ukudakwa, lapho enyakaziswa imisebenzi yengqondo, bokuphila nesimilo umuntu. abantu Drunk musa ukuzibamba futhi ngakho ayevame awela izimo aluhlaza cwe.
Sheshani - lapho indoda ezisheshayo, kungaba, isibonelo, iwe, siwisa okuthile, ikhefu. Kusukela ngaphandle ngokuvamile ubukeka iwubuphukuphuku. Hhayi lutho bathini: washesha kwenza imfucuza!
Amahloni - kunabantu, ngoba khona ukungakhululeki okuthile yakhe ngokuvamile baba abahlanganyeli enkulu kwezinye izindaba.
Yiqiniso, izimo kungazwakali empilweni singenzeka nangenxa yezinye izizathu. Ngokulandelako, cabangela ezinye izinketho.
izimo kungazwakali lapho amadoda iwe
Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngenxa ephuza imimoya eminingi kakhulu. Fall ubuso isaladi ngesikhathi ephathini - lokhu kuyiphutha ezincane, okungase uvumele odakiwe. izimo kungazwakali ka ibencono - lokhu kuwa on the dance floor futhi ukuze lizuze abantu intokazi izosishayisa esiteji ngingqongqotha umculi imilenze ukuthukana ecasulayo noma ahlele striptease kuwo wonke ukubona.
Ngezinye izikhathi umuntu angangena indaba buwula ngoba ngamandla alo: Robi Braun, isibonelo, kakhulu uthinta ngesikhathi kuxoxwa, ngephutha waphula ekhaleni lakhe emi engumngane esilandelayo.
Futhi ngezinye izikhathi indaba silly kungenzeka kubangelwa ukungakwazi umlomo wakhe avalwe: igumbi ukubhema acoce indzaba ezahlukene mayelana boss ezihlekisayo, futhi wayemi eduzane ...
izindaba ezingasile ezihlekisayo eziye zenzeka abesifazane
I ubulili fair, ngokuvamile kakhulu awela izimo aluhlaza cwe. Abesifazane zivame ezihlobene izindaba ezihlekisayo endleleni. Ziningi kakhulu izindaba namavidiyo ngendlela intokazi uzama agcwalisa imoto ohlangothini olungafanele, lipstick ngenkathi ushayela, amaphoyisa ephendula imibuzo, ukukhahla cilia eside. Kusukela zangempela izindaba bazalwa ezilula:
Beautiful intombazane ukubopha ngesikhathi Ilobhothi abomvu. стоит, ее все объезжают, сигналят. I ophuzi - intombazane akazange nakancane ukuwushintsha, oluhlaza - imoto kuwufanele, konke go round, honking. Nalapha bomvu kuqala, bese ophuzi, futhi ukukhanya green, intombazane namanje akazange nakancane ukuwushintsha. вежливо спрашивает: " Мадам, предпочитает какой-нибудь другой цвет?" Umshini is iphoyisa efanelekayo ngenhlonipho uyabuza: "Mma, uthanda nezinye umbala?"
Umfazi ucela umfazi: "S'thandwa sami, ake uthenga imoto, ngafunda ukushayela, sizoya, ukubona ukukhanya kwakho." Umyeni ngididekile: "Lokhu noma lokho?"
Futhi izintokazi ngokuvamile baba yizisulu unendlela yakhe. Mfushane isiketi imbongolo uyembulile enyakazayo ingubo kufaneleka yabonisa zonke amaphutha sibalo, ubhodisi zokuphola unbuttoned, ibhulukwe Friend wavele - le ndaba kungenzekani yilowo nalowo wesifazane, kungakhathaliseki isimo sakhe sezenhlalo.
izimo iwubuphukuphuku lapho abantu abadumile iwe
Zhizel Beyonse - umculi odumile waseMelika nowaseNingizimu umdansi - ngesikhathi inkulumo Montreal (Canada) lungaba seduze kakhulu fan ezinamandla, okuyinto ngimi esiteji. Izindwani bayabanjwa curls wakhe. Ukuze uthole usizo ngokushesha washesha abasizi. Umculi ukhulula imizuzu 7, kodwa lesi sikhathi, waqhubeka ukucula, nakuba ebusweni kubonakala ngokucacile ukwesaba namahloni. Ukuze ukumelana anjalo Beyoncé lithole izincomo eziningi.
Popular Umculi waseMelika Keti Perri enza Guadalajara (eMexico), konke kusenjalo wagxuma ku ikhekhe elikhulu esiteji ukuthi awuzange buhambe abalobi. Ngenxa yalokho, glaze uye ezindaweni ezikude naseduze, izibukeli eziningi ukuze uthole ezingcolile. Kodwa lokho kwaba nengxenye kuphela inkinga, ngoba Katie ayikwazanga asukume, wayelokhu ilele ku-pink ukhilimu ziwele phezu kwabo. UMarta waphuthuma aid labasizi bakhe, naye washelela wawa. Ekugcineni, Perry umane wahudulwa izingalo ekusithekeni, efana isaka lamazambane, futhi izinto zokuhlanza esiteji, ukuze izinsalela ikhekhe ungagxambukeli nezinye abaculi enza. Bophela ayikuthandi izilaleli, uKathy, uhlawuliswe isamba esingu abahleli ekhonsathini. Kuyadabukisa lokho ngakho futhi ayinangqondo Ungaqeda isifiso ugqame.
izimo okungenangqondo phakathi nezingxoxo noma izinkulumo zeningi - yilokhu kwaqashwa uMengameli Ukraine uViktor Yanukovych. "Sidinga kabusha izinsimbi ukuze kakhulu ekujuleni kwawo ...", "Anton laseChekhov - imbongi omkhulu Ukrainian ..." "A-teddy bear Ulalela kodwa adle ..." - ngokuvamile amazwi anjengokuthi zizwile uViktor Yanukovych. Kukhona ngisho amaqoqo, okuyinto ekhonjiwe amaphutha akhe, isihloko kuhlanganiswe - evela endle lwesifundo, izincwadi, umlando nokunye.
Dzhennifer Lourens, actress American, izintatheli awakholelwa yezinto ezibangela amahloni kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kaningi uwela - ekhaphethini obomvu, enkundleni, ezitebhisini ...
Akuphumelelanga izingubo inkanyezi - ngesihloko ethandwa kakhulu. Ukugqoka ngendlela evumelana nesimo sezulu noma kunganambitheki, osaziwayo ngokuvamile ukuwela izimo okungenangqondo kakhulu.
Indlela yokugwema Ezimweni ezinjalo,
Akekho ogonyiwe kusukela isimo engenangqondo, ukudideka kungenzeka kunoma ubani. Ukunciphisa amathuba bheka silly, akudingeki sidakwe ukulawula indlela aziphatha ngayo, acabange ngemiphumela kungenzeka, ukukhumbula ukuthi izwe incane, musa akhulume kabi abanye hhayi sokuhleba, njalo ibe Lingerie ehlanzekile enhle, amasokisi lonke. Kusukela namuhla amakhamera ezindaweni zomphakathi - akuyona into engavamile, kubalulekile ukuba siziphathe njalo sengathi abanye ngikubheke.
Indlela ukusinda isimo kungazwakali
umuntu Awkward ukuwela izimo eyinqaba, akwehli kahle, efuna abanye kungukuthi kakhulu igxile umuntu wakhe bese ukhohlwa ngesehlakalo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Esimweni ngasinye, kufanele sizame ukuba aphume izindaba ne ukulahlekelwa okungenani kanye nokugcina ukuzethemba. The best - konke iphenduke ihlaya, ukuhleka nabanye. Ngezinye izikhathi kufanele nje kudingeka axolise, siqhubeke ukukhulumisana.